ESI MELITE NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Na ngwaọrụ ọ bụla Android, mgbe ejikọrọ na Ịntanetị, ị nwere ike ibudata faịlụ na ngwa iji ngwaọrụ a wuru. N'otu oge ahụ, mgbe ụfọdụ, enwere ike ịmalite ihe ntanetị n'enweghị usoro ọ bụla, na-ewe ọtụtụ okporo ụzọ na njikọ na-adịghị. N'okwu a taa, anyị ga-enyere aka dozie nsogbu a site na ịkwụsị nbudata n'ọrụ.
Kwụsị nbudata na gam akporo
Usoro ndị anyị na-atụle ga-ekwe ka ịkwụsị nbudata nke faịlụ ọ bụla, n'agbanyeghị ihe kpatara mmalite nbudata. Otú ọ dị, ọbụna na nke a n'uche, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịghara itinye aka na usoro nke imelite ngwa ngwa arụpụtara na ọnọdụ akpaka. Ma ọ bụghị ya, ngwanro ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma, mgbe ụfọdụ achọrọ ntinyeghachi. Karịsịa maka ikpe ndị dị otú ahụ ka ọ dị mma ka ị hụ na ị ga-ebute nrụpụta akpaaka tupu oge eruo.
Hụkwa: Otu esi gbanyụọ mmelite ngwa ngwa nke ngwa na gam akporo
Usoro 1: Ogwe ọkwa
Usoro a bara uru maka Android 7 Nougat na n'elu, ebe "ákwà mgbochi" ahụ gbanwere mgbanwe ụfọdụ, gụnyere ikwe ka ị kagbuo mmalite download, n'agbanyeghị ebe isi iyi ahụ dị. Iji mee ka nbudata faịlụ dị na nke a, ikwesiri igosi ọnụ ọgụgụ kachasị nke omume.
Na nbudata ọrụ nke faịlụ ma ọ bụ ngwa, gbasaa "Ogwe ọkwa" ma chọta nbudata ịchọrọ ịkagbu.
Pịa na akara na aha nke ihe onwunwe ma jiri bọtịnụ nke dị n'okpuru. "Kagbuo". Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-eme ka nbudata ahụ kwụsị kpam kpam, a ga-ehichapụ faịlụ ndị echekwara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mfe dị ka o kwere mee iji wepụ ntụziaka a ma ọ bụ "rapaara" site na ntụziaka a. Karịsịa ma e jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ eji mee ihe na nsụgharị nke gam akporo.
Usoro 2: Download Manager
Mgbe ị na-eji ngwaọrụ ndị na-enweghị isi na gam akporo gam akporo, ụzọ mbụ ga-aba uru, n'ihi na na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ nbudata "Ogwe ọkwa" enyeghị ngwaọrụ ndị ọzọ. Na nke a, ị nwere ike ịbanye ngwa ngwa. Download Manager, ịkwụsị ọrụ ya ma, site na ya, ihichapụ ihe nbudata niile. Ihe ọzọ aha nwere ike ịdị iche iche dabere na mbipute na android shell.
Rịba ama: A gaghị egbochi ndetu na Ụlọ Ahịa Google ma nwee ike ịmalitegharịa.
Open usoro "Ntọala" na ekwentị gị, pịgharịa gaa na ngalaba a iji gbochie "Ngwaọrụ" ma họrọ ihe "Ngwa".
N'elu aka nri n'elu pịa akara ngosi nwere oghere atọ ma họrọ site na listi "Gosi usoro usoro". Biko rịba ama na na nsụgharị ochie nke gam akporo ọ ga-ezu iji pịgharịa peeji nke aka nri ruo taabụ na otu aha ahụ.
N'ebe a, ịchọrọ ịchọta ma jiri ihe ahụ Download Manager. Na nsụgharị dị iche iche nke ikpo okwu, akara ngosi nke usoro a dị iche, mana aha ahụ bụ otu.
Na ibe nke mepee, pịa "Kwụsị"site n'igosi ihe ahụ site na igbe na-egosi. Mgbe nke ahụ gasịrị, a kwụsịla ngwa ahụ, a ga-eme ka nbudata niile faịlụ site na isi iyi ọ bụla kwụsịrị.
Usoro a bụ maka eluigwe na ala ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ naghị adị irè karịa nhọrọ mbụ maka oge na-ewe. Otú ọ dị, nke a bụ naanị ụzọ iji kwusi na-ebudata faịlụ niile na-enweghị otu ugboro ọtụtụ ugboro. Otú ọ dị, mgbe ị kwụsịrị Download Manager nbudata nbudata ọzọ na-eme ka ọ rụọ ọrụ na akpaghị aka
Usoro 3: Ụlọ ahịa Google Play
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị nbudata ngwa ahụ site na ụlọ ahịa Google, ị nwere ike ime ya na ya. Ị ga-alaghachi na ngwanrọ na Google Play Market, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, chọta ya site na iji aha ngosi na "Panelite ngosi".
Mepee ngwa na Ụlọ Ahịa Play, chọta ebe nbudata ma pịa akara ngosi ahụ na ihe oyiyi nke obe. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-egbochi usoro ahụ ngwa ngwa, faịlụ ndị agbakwunyere na ngwaọrụ ahụ ga-ehichapụ. Usoro a nwere ike nyochaa zuru ezu.
Usoro 4: Kwupu
N'ụzọ dị iche na nsụgharị ndị ọzọ, a pụrụ ịtụle nke a karịa ọzọ, ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere nanị iji kwụsị nbudata. N'okwu a, ọ gaghị ekwu na ọ ga-abụ ihe ọjọọ, ebe ọ bụ na na mgbakwunye na nbudata "eyịre", enwere ike inwe ọnọdụ mgbe nbudata bụ ihe na-abaghị uru. Ọ dị n'ọnọdụ dị otú a ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịkwụsị njikọ ahụ na Ịntanetị.
Gaa na ngalaba "Ntọala" na ngwaọrụ " na na ngọngọ ahụ "Netwọk Ntanetị" pịa na "More".
Na peeji na-esonụ, jiri mgba ọkụ ahụ "Ọnọdụ Flight", si otú ahụ igbochi njikọ ọ bụla na smartphone.
N'ihi omume ndị a, ịchekwa ga-egbochi ya na njehie, ma ga-amaliteghachi mgbe ọnọdụ a kapịrị ọnụ kwụsịrị. Tupu nke ahụ, ị ​​kwesịrị ịkagbu nbudata na ụzọ mbụ ma ọ bụ chọta ma kwụsị Download Manager.
Echere na nhọrọ dị oke ezu iji kpochapụ nbudata faịlụ site na Ịntanetị, ọ bụ ezie na nke a abụghị nhọrọ niile dịnụ. Họrọ usoro a ga-adabere na njirimara nke ngwaọrụ na nkwekọrịta onwe onye.